पुरुषले कहिल्यै थाहा पाउँदैनन् महिलाले गोप्य राखेका यस्ता कुरा – Saurahaonline.com
सौराहा अनलाइन | २०७६, १४ चैत्र शुक्रबार
काठमाडौं : पुरुषका बारेमा महिलाई प्रायः सबैकुरा थाहा हुन्छ । मानव सृष्टिको रचनाकार नै महिला भएकाले पुरुषको बारेमा थाहा नहुँने त कुरै भएन । तर महिलाका बारेमा कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन पुरुषले कहिल्यै पनि थाहा पाउन सक्दैनन् । के हुन् त त्यस्ता कुरा ? जुन महिलाले लुकाएर राखेका हुन्छन् र पुरुषले थाहा पाउन सक्दैनन् ।
रोमान्स : केटाहरु रोमान्स मन पराउने खालका हुन्छन् यो कुरा सबैलाई थाहा छ । तर पुरुषको तुलनामा महिला अझ धेरै रोमान्स मन पराउँछनन् जुन महिलाले सधैँ लुकाएर राखेका हुन्छन् र यो कुरा पुरुषले थाहा पाउँदैनन् ।
पैसा बचाउँन : महिलाहरुले धेरै सामान खरिद गरेको र खर्चालु भएको कुरा बारम्बार सुनिएको छ । तर पैसा बचाउन पुरुष भन्दा महिला निकै अगाडि हुन्छन् । महिलाहरु आफ्नो पैसा बचत गर्छन र श्रीमान वा केटा साथीको पैसामा सामान किन्छन् भन्ने चाहिँ कमैले थाहा पाउँछन् ।
राति घुम्न : पुरुषको तुलनामा महिला राति घुम्न धेरै नै मन पराउँछन् । तर यो कुरा उनीहरुले लुकाएर राखेका हुन्छन् र समय आएपछि राति घुमघाम गर्छन् ।
झगडा गर्न : पुरुषहरु झगडा गर्न अगाडि हुन्छन् भन्ने बुझाई छ तर यसमा पनि महिला अगाडि हुन्छन् । झडालु स्वभाव नदेखाएपनि महिलाहरु झगडा गर्ने समयमा कालीको रुप धारण गरी भयंकर रुपमा झगडा गर्न सक्छन् ।
बिहे अगाडिको कुरा : महिलाले आफ्नो श्रीमानसँग बिहे अगाडिको कुरा कहिल्यै बताउँदैनन् । उनीहरुसँग बिहे अगाडिको केटा साथी र तिनीहरुसँगको सम्बन्धका बारेमा सोधियो भने कुनै कुरा बताउँदैनन् तर श्रीमानको बारेमा निकै खोजीनिधि गर्छन् । बिहे अगाडिको सम्बन्धका बारेमा श्रीमानले कुनै कुरा पनि थाहा पाउँदैनन् ।
यदि श्रीमानले कुनै कुरा गरेर चित्त दुखाएकाे खण्डमा उनले आफ्नो पूर्व प्रेमीसँग तुलना गर्नेछिन् । यो कुरा पनि श्रीमानसँग भन्दिनन् र पुरुषले कहिल्यै थाहा पाउँदैनन् ।
श्रीमतीले सधैँ आफ्नो श्रीमानको जज् गरिरहेकी हुन्छिन् । आफ्नो श्रीमान सबै कुरामा पर्फेक्ट भएको मन पराउँछिन् । श्रीमानमाथि हुनसक्ने शंकालाई निकै नै ध्यान दिने गर्दछन् । याे कुरामा श्रीमान सधैँ अनभिज्ञ नै हुन्छन् ।
तपाईंको भाग्यफल कस्तो रहेको छ ? २०७६, २२ चैत्र शनिबार
कोरोना अपडेट : कतारमा १०७५ जना संक्रमति, आज मात्र १२६ जना संक्रमित भएको पुष्टि २०७६, २१ चैत्र शुक्रबार
गढीमाई बाहिनीबाट सशस्त्र प्रहरीका ९७ जना नयाँ जवान दिक्षित २०७६, २१ चैत्र शुक्रबार
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै दिन्छ गलत सूचना, संक्रमितको संख्या कहिले ७ कहिले ६ २०७६, २१ चैत्र शुक्रबार
भरतपुर ८ ले गर्यो राहात बितरण २०७६, २१ चैत्र शुक्रबार
रोटरीद्वारा इच्छाकामना गाउँपालिकामा खाद्यान्न सहयोग २०७६, २१ चैत्र शुक्रबार
तपाईंको भाग्यफल कस्तो रहेको छ ?
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) परिवार तथा आफन्तजनमा आत्मियताको भाव बढ्नेछ भने माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ ।.....
कोरोना अपडेट : कतारमा १०७५ जना संक्रमति, आज मात्र १२६ जना संक्रमित भएको पुष्टि
गढीमाई बाहिनीबाट सशस्त्र प्रहरीका ९७ जना नयाँ जवान दिक्षित
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै दिन्छ गलत सूचना, संक्रमितको संख्या कहिले ७ कहिले ६
भरतपुर ८ ले गर्यो राहात बितरण
रोटरीद्वारा इच्छाकामना गाउँपालिकामा खाद्यान्न सहयोग
बेलायतमा कोभिड १९ का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३,६०५ पुग्यो
कपिलवस्तुमा भीषण आगलागी ३९ घर ज’लिसके
सावधान ! ई-सेवा सुरक्षित छैन : यसकारण तपाईको ई-सेवाको रकम जतिबेलापनि चोरी हुनसक्छ